ပို့ဆောင် - U Hton Goldsmith & Jewellery
Home » ပို့ဆောင်
*ရာသီဥတုအခြေအနေနှင့် အခြားသောအကြောင်းအရင်းများကြောင့် ပစ္စည်းများ‌ရောက်ရှိရန် အချိန်ကြန့်ကြာနိုင်ပါသည်*
ရန်ကုန်မြို့အပြင် အခြားမြို့တွေပါ ပို့ပေးပါသလား?
ရန်ကုန်မြို့အပြင် အခြားမြို့တွေပါ ပို့ပေးပါသည်။ ဆိုင်ထည်မှာယူပါက ခန့်မှန်းခြေ ၃ ရက်လောက်ဆို ရောက်နိုင်ပါသည်။ အော်ဒါထည်ဆိုပါက အော်ဒါဒီဇိုင်းပေါ်မူတည်၍ 1 ပတ်ကနေ3ပတ်အထိ ကြာနိုင်ပါသည်။ အခြားနယ်မြို့ကြီးများကိုလည်း အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါသည်။
ပြည်တွင်းအပြင် ပြည်ပတွေကို Delivery ပို့ပေးပါသလား?
အွန်လိုင်းပေါ်မှ ၀ယ်သောရွှေထည်၊ ကျောက်ထည်လေးများအား ပြည်တွင်းအပြင် စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား၊ ထိုင်း နှင့် အမေရိကားနိုင်ငံများလည်း ပို့ဆောင်ပေးနေပါသည်။ သို့သော်ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး အဆင်မပြေလျှင် အကြောင်းပြန်ပေးပါသည်။ အသေးစိတ်ကို အော်ဒါမှာယူတဲ့အခါ ဖုန်း (သို့) အီးမေး (e-mail) ကနေတစ်ဆင့် ပြန်လည်ရှင်းပြပေးပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်အား Messenger မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ပို့ဆောင်မည့်နေရာဒေသနှင့် အနီးအဝေးပေါ်မူတည်၍ ပို့ဆောင်ခစရိတ်အမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ပို့ဆောင်စရိတ် 3000 ကျပ်မှ 6000 ကျပ်အထိ ကျသင့်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုသော အကြောင်းအရာများရှိပါက Messenger မှတစ်ဆင့် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့အတွင်း အိမ်အရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ အချို့နယ်မြို့ကြီးများကိုလည်း အိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ သို့သော်ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး အဆင်မပြေလျှင်လည်း အကြောင်းကြားပေးပါသည်။ အခြားနေရာများကိုမူ ပို့ဆောင်ရမည့်လိပ်စာနှင့် အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်စေမည့်နေရာသို့ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
မှာယူသောပစ္စည်းအား ဘယ်လောက်အကြာတွင် ရနိုင်မည်လဲ?
လူကြီးမင်းများ မှာယူသော ရွှေထည်ပစ္စည်းသည် ဆိုင်တွင်အသင့်ရှိပြီးသား အထည်ဖြစ်ပါက ခန့်မှန်းခြေအရ ၃ ရက်မှ တစ်ပတ် ကြာနိုင်ပြီး၊ Order လုပ်ဆောင်ရမည့် အထည်များဖြစ်ပါက ခန့်မှန်းခြေအရ ၃ ပတ်အထိ ကြာနိုင်ပါသည်။
ပို့ဆောင်ရမည့်နေရာဒေသနှင့် အချိန်အခါပေါ်မူတည်သောကြောင့် အတိအကျမသိနိုင်ပါ။ အတိအကျသိနိုင်ရန် Messenger မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ဘယ်လို Delivery အမျိုးအစားနဲ့ပို့ပေးသလဲ?
အာမခံချက်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော Delivery Service ဖြင့်ပို့ပေးပါသည်။
ဦးထုံရွှေဆိုင်ကနေ ပစ္စည်းပို့ပေးရင် အကြောင်းကြားပေးလား?
ရွှေထည်ပစ္စည်းကို Delivery အားအပ်လိုက်သည်မှစ၍ Customer အား Two Days Update လုပ်ပေးပါသည်။
ပစ္စည်းလက်ခံရရှိပြီးလျှင် ဦးထုံရွှေပန်းထိမ်သို့အကြောင်းကြားပေးရပါမည်။ Customerများ၏အားပေးမှုကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
အိမ်ကို Direct မရောက်ဘူးဆို ဘယ်မှာသွားယူရမှာလဲ?
အိမ်သို့ Direct မရောက်ဘူးဆိုပါက Customer များနှင့်အနီးစပ်ဆုံးနေရာသို့ ပို့ပေးပါသည်။ သို့မဟုတ် Customer များအဆင်ပြေရန် ချိန်းဆိုသောနေရာသို့ ပို့ပေးပါသည် (ဥပမာ ကားဂိတ်)။ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးတွင် အခြားနေရာများမှာ အခက်အခဲရှိသောကြောင့် နားလည်ပေးစေချင်ပါသည်။
ပစ္စည်းလာပို့လို့ အိမ်မှာမရှိဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်ပေးမှာလဲ?
အိမ်မှာရှိသောနေ့ကို Delivery အား ၂ ကြိမ်ပြန်လည်ချိန်းဆိုပြီး ပေးပို့ခိုင်းနိုင်ပါသည်။ ၂ ကြိမ်အထက်ကျော်လွန်ပါက Delivery Charges ထပ်မံကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။
အခြားမေးမြန်းစရာရှိပါက Messenger သို့မဟုတ်
အမှတ် 528 (မြေညီထပ်)၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ ၂၇လမ်းနှင့်၂၈လမ်းကြား၊
ဆိုင်ဖွင့်ချိန် မနက် ၉ နာရီ မှ ည ၅ နာရီခွဲ အထိဖွင့်လှစ်ပါသည်။
အခန်း (B) 01-05 (မြေညီထပ်)၊ လမ်းမတော်ပလာဇာ (သံစျေးအနီး)၊ လမ်းမတော်လမ်း၊
* ပြင်ပအခြေအနေအခက်အခဲများကြောင့် ဖုန်းနံပါတ်နှင့် ဆိုင်ဖွင့်ချိန်များ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည် *